Masibambane silwe ubukoli | News24
Masibambane silwe ubukoli
uMajor General Jeremy Veary olisekela lokomishinala ophethe abecuphi kwiphondo umamele izikhalazo zabahlali ngethuba amapolisa aseNyanga ebambe imbizo eZolani Center. UMFANEKISO: Yamkela Mkebe
Isipolisa siyaqhubeka nokumema uluntu ukuba lungenelele ekulweni ulwaphulo-mthetho.
Lo ibingumyalezo wamapolisa kwimbizo ebibanjwe eZolani Centre eNyanga kwiveki edlulileyo. Kulembizo ibibibanjwe ziinkokheli zasesipoliseni, iqonga lesipolisa loluntu (CPF) kunye nabahlali aboneleyo lulwaphulo-mthetho olugqubayo kulelokishi.
“Ukuba uluntu lunokuqhubeka lusebenzisana nathi lungalukhulu utshintsho kulengingqi. Siyazi ukuba ulwaphulo mthetho lugqithisile yaye sizakuqhubeka ukuqinisa isandla,” utshilo uMajor General Jeremy Veary olisekela likakomishinala ophethe abecuphi kwiphondo.
Uvumile ukuba isikhululo samapolisisa saseNyanga siphantsi koxinizelelo olukhulu yaye kuninzi okudingekayo ukuze sisebenze ngendlela.
Enye yezikhalazo ezithacazisiweyo ngumba wemigewu ephume izandla kwisitalato iMew Way Drive apho abantu babanjwa inkunzi ilanga lihlab’ umhlaba.
Amanye amalungu oluntu atyhole amagosa akwantsasana ngokukhuthalela ukuxutha utywala kumashishini angagunyaziswanga ngethuba engasondeli nokusondela kwizindlu ekuthengiswa kuzo iziyobisi.
Kuvele nokuba kwingingqi yaseNyanga kukho umkhwa wokuhlasela amapolisa xa ezokubamba imigewu.
“Enye yemicelamngeni amapolisa ajongene nawo kulengingqi kukugityiselwa kweemoto zawo xa ezokubamba abo bophula umthetho okanye bezokuvala izimokolo.
Namavili ayahlatywa kophulwe iifestile nto leyo yenza uxinizelelo olugqithisileyo kwinkonzo yesipolisa,” utshilo Martin Makhasi ongunobhala weCPF yaseNYanga.
Uxelele indimbane ukuba iCPF inazicwangciso ezinamanqaku amahlanu abazakuwajongisisa.
Okokuqala bazimisele ukuvuselela uluntu ukuba lusebenzisane neCPF kunye namapolisa.
“Sisebenza nzima siqinisekisa ukuba sitalato nganye sinekomiti esebenzayo ejongene nolwaphulo-mthetho.
Okwesibini sizimisele ekulweni ukusetyenziswa kweziyobisi notywala kuba ezinto zikhokhela kulwaphulo-mthetho,” utshilo oka Makhasi.
Uthe ukuhlukunyezwa kwabasetyhini kunye nabantwana yenye yengxaki ezongamele lelokishi.
“Sifuna nokuqinisa ukhuseleko ezikolweni kuba siyazi ukuba zijongene neengxaki eziliqela. Yaye sijonge nokuzisa ucwangco nokuphuhlisa ulutsha,” utshilo uMakhasi